ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “ကိုပေါ အလိမ်ခံရခြင်း”
ယုန်တောင်ပြေး သူဌေးမြောက်လိုက် တဲ့ ..ဟီဟိ..
အမတို့အထည်ဆိုင်မှာလဲ အဲလိုလူလိမ်တွေ သူခိုးတွေ လာဖူးတယ်။ အများကြီး ရောက်လာ ဟိုဟာကိုင်ကြည့် ဒီဟာကိုင်ကြည့် ဈေးမေး ပြခိုင်း ပတ်ချာလည်အောင် လုပ်ပြီး ဘာမှမ၀ယ်ပဲ ပြန်သွား။ ဒါဆို ပါပြီသာမှတ်။ တယောက်တည်းရှိနေတုန်း လူများရင် သူတို့ကို တယောက်ချင်းပဲ ပြမယ် ဆိုပြီး ခပ်တည်တည် ပြောရတယ်။ အဲဒါ ဈေးသည်တိုင်း ဆိုင်တိုင်း ခံဖူးကြတာပါ ကိုပေါရေ..
ဩော်... လိမ်စားပုံတွေကတော့ စုံနေပါ့လား။ နောက်မှ အဖွားတို့တုန်းက အလိမ်ခံရပုံတွေ ရေးဦးမယ်။
အရေးအခင်းပြီးကျောင်းအပိတ်မှာ ပထမနှစ်ဆိုတော့ ကိုပေါက ငယ်ငယ်လေးပေါ့..။ ကျမက ကျမနဲ့ ရွယ်တူလောက်မှတ်တာ... ဟီဟိ.. ချောဒီးးး
အဟင့်.. အရေးအခင်းမှာ သားသားကိုမွေးတောင်မွေးတေးဝူး... :(
မခင်မင်းဇော်.... အခုကျနော်နေတဲ့အိမ်နားက မြန်မာလူမျိုးရောင်းတဲ့ စတိုးဆိုင်မှာလဲ မခင်မင်းဇော်ပြောသလိုပဲ... တအုပ်ကြီးလာပြီး အလစ်သုတ်သွားတာကို ခံကြရလေ့ရှိသတဲ့။
ဆိုးဝှပ်..... “အဖွားတို့တုန်းက” လို့ပြောတာကို ရုတ်တရက် ကိုယ့်ကိုယ်ကို နာမ်စားသုံးလိုက်တာ အောက်မေ့လို့ ရုတ်တရက် ရီချင်သွားမိသေးတယ်။း-)
ဆရာမမေငြိမ်း..... တိန်....။ ရဘာဒယ်...ရဘာဒယ်။ တကယ်တော့ ကျနော်က ကဖိုးဇေထက် တနှစ်ပဲ ကြီးတာခင်ဗျ။ ၈၈ မှာ သူက ဆယ်တန်း။ ကျနော်က ဆယ်တန်းအောင်ပြီးသား။ အရေးအခင်းပြီးတော့ ကျောင်းတွေ သုံးနှစ်တိတိပိတ်တယ်။ ကျနော်က ဆယ်တန်းအောင် ယောင်ခြောက်ဆယ်ပေါ့။ အဲသည်နောက် ကျောင်းတွေဖွင့်တော့ ကျနော် ၀ိုင်အိုင်တီ တက်ရတယ်။ အဲသည်မှာ တက်နေတုန်း ဗြုန်းဆို နောက်တခါ ထပ်ပိတ်သွားပြန်တယ်။ အဲသည်မှာ ကောင်းရောင်းကောင်းဝယ် ဖရဲသီးသည် ဖြစ်ရတာပေါ့။
ခရေတန်း..... (အသံထွက်မှားရင် သည်းခံပါ။) အရေးအခင်းမှာ မွေးတေးဝူးဆိုတော့ တိုိ့က ဦးဦးအရွယ်ပေါ့ကွယ်။
ကိုပေါ ခံခဲ့ရတဲ့ လိမ်နည်းမျိုးလည်းပါတယ်
ဆိုင်ထဲကို ဘယ်က ကလေးမှန်းမသိခေါ်လာ ပစ္စည်းတွေထဲ့ ပြီးမှ ပိုက်ဆံ မလောက်လို့ ပြန်ယူဦးမယ် ကလေး ခဏထားခဲ့မယ် ဆိုပြီး လိမ်တာကတနည်း (ကလေးက သူတို့လူ ဖြစ်ချင်လည်းဖြစ်မယ်၊ မုန့်ဖိုးပေးမယ် ခဏလိုက်ခဲ့ ဆိုပြီး ခေါ်လာတာလည်းရှိတယ်)
အစ်မ ခင်မင်းဇော် ပြောသလိုပဲ ဈေးသည်တိုင်း ဆိုင်တိုင်း ခံဖူးကြတာပါ အထူးသဖြင့် ဆိုင်သစ်တွေပေါ့
အစစအရာရာ ရှားပါးလာတော့ သမုဒ္ဒယာ ဝမ်းတထွာ အတွက် လုပ်မိလုပ်ရာ လုပ်လာကြတော့တာပေါ့
နောက်ထပ်လိမ်ပုံလိမ်နည်းတွေ ရှိသေးတယ် ကိုပေါရေ :)
I also had this kind of experience exactly when I was helping at my mother's shop. The cheater used the same technique and forced me to return the change2times. At that time, I was so naive that I understood to be cheated afterawhile. This same female cheater dared to come back the following day and tried to cheat me again. But, it was quite difficult to prove that she had been wrongdoing and I only got to be more careful on my side.
ကိုပေါတစ်ယောက် မာယာဒေဝီတွေရဲ့ အလှမှာ ယစ်မူးသွားလို့ ဖြစ်မှာပေါ့။ ဟီးဟီး။ စတာ။
ကိုပေါရေ အလိမ်ခံရတဲ့ အရသာကြီးက အရမ်းဆိုးရွားပါတယ်။ ကျွန်မဘ၀မှာ တစ်ကြိမ်ပဲ အလိမ်ခံရပြီး တစ်ခါတည်းနဲ့ မှတ်သွားတယ်။ ကျွန်မ အလိမ်ခံရတာက မင်္ဂလာပွဲနှင့်ပတ်သတ်ဆိုတော့ ခါးသီးမှုက ပိုမိုပြင်းရှပါတယ်။ အသေးစိပ်ကို ပို့စ်တစ်ခု ရေးပါဦးမယ်။ ဝေမျှပေးတာအတွက် ကျေးဇူး ကိုပေါ။ ပိုက်ဆံတွေနှင့်ပတ်သတ် သတိထား ၊ သင်ခန်းစာ ယူစရာတစ်ခုပေါ့။
သတိထားစရာလေးတစ်ခု ရလိုက်ပါတယ်။ နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ကို လိမ်နေကြပါလားနော်။ လူလိမ်တွေလည်း ဥာဏ်လည်း တော်တော်ကောင်းကြတယ်ကော :D ဥာဏ်နီဥာဏ်နက်တွေပေါ့။
ဟိုတုန်းက ကိုပေါအားနဲ့မာန်နဲ့ပြောပြနေပုံတွေးမိပြီး ပြုံးမိရပြန်တာပေါ့။
စိန်ရတု ဘူးသီးကြော်အကြောင်းရေးမယ်ဆိုလို့ ဖတ်ဖို့စောင့်နေတယ်။
dwbh..... ဟုတ်တယ်ဗျိုး။ ကျနော် အင်တာနက်ပေါ်မှာ လိမ်နည်းတွေကို တခါက လိုက်ရှာကြည့်မိတော့ ဒီ့ထက်ဆိုးတဲ့ လိမ်နည်းတွေ တွေ့ရသေးတယ်။ နောက်မှ အကြောင်းသင့်တဲ့အခါ အဲဒီ လိမ်နည်းတွေအကြောင်း ရေးရဦးမယ်။
mama.... ကွန်မင့်အတွက် ကျေးဇူးပါ။
ကိုမျိုး(အက်စ်ဂျီ).... ဒါဆိုရင်တော့ ဒီနည်းက အတော်ရေပန်းစားတဲ့ နည်းဖြစ်ရမယ်။ ကျနော်တော့ အရွယ်ရောက်တဲ့အထိ အဲဒီအကြောင်း မသိလိုက်တော့ ခံလိုက်ရလေတယ်။
လွိုင်လဲင်းမ်...... မောင်လေးတော်တယ်။ ဒီအချက်ကို ဘယ်သူမှ မစဉ်းစားမိကြဘူး။ နောက်တာပါဗျာ။ အဲဒီ မာယာဒေ၀ီခြောက်ပါးက ပါမလုံ....ပုံမလာပါဘူး။
ကေကေ.... မရယ်နဲ့ ကေကေ။ အဲသည် မြင်သာထိပ်မှာ ကျနော်ဖရဲသီးရောင်းနေတာကို ရုပ်ရှင်ရိုက်နေတာမှတ်လို့ လာကြည့်သူမရှား.... လို့ ပြောရင်ယုံမှာလားဟင်။
မလင်းလက်.... အဲသည်လို လိမ်နည်းတွေကို တတ်နိုင်သမျှ ဖော်ထုတ်ပေးရင်တော့ ဖတ်မိတဲ့လူ သတိထားနိုင်တာပေါ့နော်။
သဉ္ဇာ...... ဒီထက်ရှုပ်ထွေးတဲ့ လိမ်နည်းတွေလည်း ရှိသေးသတဲ့။
တီတီအယ်လ်.... လာမယ်ကြာမယ်လေ။ ဆရာမ ဒေါ်ရိုသီ ဆီမှာ တိုင်ကပ်နာရီကြီး တနာရီကို တချက်မြည်တဲ့အကြောင်း ပြောတာနဲ့ စရမယ်။း-)
ကိုပေါ… အိုး… ကျွန်မတို့ရပ်ကွက်နဲ့ နီးနီးလေး… ပြောလို့ မရဘူးနော်… ကျွန်မတောင် ၀ယ်စားရင် စားဖူးမှာ…
ကိုပေါက ဈေးရောင်းသူ အနေနဲ့ ခံရတာ… ကျွန်မက ဈေးဝယ်သူ အနေနဲ့ ခံရတာ…
ရပ်ကွက်ထဲ လှည့်ရောင်းတဲ့ နှင်းဆီပင်တွေ လှလွန်းလို့ ဆို ၀ယ်လိုက်တာ တကယ်တမ်း အမြစ်မပါတဲ့ နှင်းဆီပန်းသက်သက်တွေ…
တန်ခူး..... စားဖူးလောက်တယ်။ အဲဒီ ကျနော်တို့ဆိုင်နဲ့ ကပ်လျက်မှာ ဖွင့်ထားတဲ့ ရခိုင်အမျိုးသမီးကြီးတယောက်ရဲ့ မုန့်တီဆိုင်ဟာ အင်မတန်နာမည်ကြီးတယ်။ ကျနော်တို့လည်း သူ့သားတွေနဲ့ပါ ရင်းနှီးသွားတယ်။
ရိုးရိုးသားသား သမ္မာအာဇီဝ ...
ယုတ်မာတဲ့ အလုပ်တွေ လုပ်ကြတာ...
အမှတ် (၃၁) အမြန်ယာဉ်လိုင်းမှာ... ကားစပယ်ယာ လုပ်ခဲ့ဖူးသေးတာပေါ့... ၁၉၈၈ ထိ...
ဆယ်ရပ်ကွက်ဈေးကနေ... မနက်တိုင်း... ကားတက်စီးတတ်တဲ့... ကျနော်... မှတ်မိနေတဲ့... ခပ်ချောချော လူငယ် တယောက်က...
ကိုပေါ ဖြစ်မယ်ထင်တယ်...း)
BTW ... ကျနော်နဲ့ ရွယ်တူလောက်ထင်နေတာ...
ခုတော့ ၈ နှစ်လောက် ငယ်မယ် ထင်တယ်...
ကိုအောင်သာငယ်... ဟုတ်တယ်ဗျိုး။....သမ္မာအာဇီဝပဲ လုပ်ခဲ့လို့ ကျနော်အခု ကိုအောင်သာငယ်တို့နဲ့ တဖက်တည်းက သူပုန်ဘလော့ဂါ ဖြစ်နေတာပေါ့ဗျာ။ နို့မဟုတ်ရင် ရုရှားက ဘလော့ဂါသော်လည်းကောင်း၊ မြန်မာပြည်မှာ ကြီးကြီးမာစတာ တယောက်သော်လည်းကောင်း၊ သို့တည်းမဟုတ် အောက်စဖို့ဒ်မှာ သားမွေးအင်္ကျီဝတ်ပြီး (ဘဲဘဲနဲ့အတူ) အီတလီစာ စပါဂက်တီ လုပ်စားနေမှာ.... အဲဒီသုံးခုထဲက တခုခုဖြစ်ဖို့ ကျိန်းသေတယ်ဗျ...
လူတွေလဲ လိမ်နည်းပေါင်းစုံ သူတို့ပဲ သိ သိနိုင်လွန်းတယ်နော်။
အင်းစိန်မှာလဲ ဆိုင်ခွဲဖွင့်ထားတယ်ဆိုပါလား။ တလှည့်စီ ထိုင်ဖူးတယ် ဆိုပဲ။ ချိုသင်းတောင် စားဖူးမလားမသိ။ ဖရဲသီးဆိုရင် သိပ်ကြိုက်လို့။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီဆိုင်က လူကြီးကတော့ ချောဘူးတော့..။ :D
မချိုသင်း.... ချောတဲ့လူတွေ တောင်ဥက္ကလာ၊ ရုပ်ဆိုးတဲ့လူတွေ အင်းစိန် ပို့လိုက်တာလေ။ ရောင်းသူဝယ်သူ အသံတူရုံမက... ရုပ်ပါတူအောင်လို့... ဟီးဟီး.... မဒမ်ပေါလည်း အဲဒီအချိန်က အင်းစိန်ဈေး၊ မီးသတ်ရှေ့နားမှာ နေခဲ့တာတဲ့။
အီရေးအီခင်းပြီး ချိုလော့ တားနွေးတောင်နနွေးရတေးပူး
အိတိအီချိန်တုန်းက တားက တိကြားနင်းနဲ့ ချယ်ရာတွေ ယောင်းပို့ နှီကိုယ်ကြား ချွှေနွေးနေရို့ပါ
ကျာပဲ ဘိုင် ဘိုင် ချဲရီးယို
ကျနော်လည်း ခေတ်မှီအောင် လိမ်နည်းလေးရေးပါရစေခင်ဗျာ။
ကျနော်ကျောင်းသားတုန်းက သူငယ်ချင်းစာအုပ်ဆိုင်မှာ ကူထိုင်ပေးတာဗျာ၊ ဘယ်က ဘိုတကောင်လဲမသိ ၀င်လာပြီး ဓါတ်ပုံစာအုပ်တွေရွေးတယ် ပြိးတော့ ငွေမချေပဲ ပလပ်စတစ်ပြားတချပ် အတင်းထိုးပေးနေတာဗျာ၊ ရိုက်ထုတ်မတတ် ပြောလိုက်ရတယ်။ သူက ရန်ကုန်သားများ ဒေါ်လာနဲ့ ပလပ်စတစ်မခွဲတတ်ဘူးများ မှတ်နေသလားမသိ။
နိုင်ဂျံဂါးရောက်မှ အဲဒါ ပိုက်ပိုက်နဲ့ပြန်လဲလို့ ရမှန်းသိတာဗျ။ ဟီး..